फूलको महत्व हुने पर्व तिहार | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / फूलको महत्व हुने पर्व तिहार
फूलको महत्व हुने पर्व तिहार
Posted by: युगबोध in विचार November 6, 2018	0 121 Views
हामी ने पालीहरुको मुख्य पर्व यो वर्ष दशंै सकिनासाथ तिहार शुरु भएको छ । तिहारमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई मखमलीको पूmल र सयपत्री पूmलको माला, दुबो र सप्तरंगी टीका लगाउने प्रचलन रहे को छ । मखमली पूmल कहिल्यै ओ इलाउ“दै न । सयपत्रीको रङ कहिल्यै उडे र जादै न भने दूबो सधै ं हरियै रहन्छ । त्यसै ले तिहारमा यी पूmलको माला महत्वपूर्ण मानिन्छ । तिहार पर्वमा गणे शको पूजा गनेर् , यमराजको आव्हान गनेर् , बिमिरो , ओ खर, ते ल, मखमलीको माला, कटुस आदिको प्रयो गले दिदीबहिनी र दाजुभाइको सुख–समृद्धि, आरो ग्य एवं दीर्घायु हुने धार्मिक तथा पौ राणिक मान्यता रहे को छ ।
के ही वर्षयता आएर तिहारमा मखमली र सयपत्रीको माला दे खिनै छाडे का छन् । यसको ठाउमा प्लाष्टिक तथा कृत्रिम मालाको प्रयो ग बढ्दै गइरहे को छ । भारतबाट भित्रिएका प्लाष्टिकका कृत्रिम मालाले धे रै स् थानमा तिहार सकिएको छ । अकोर् तर्फ गाउ“घरमा फुल्ने मखमली, सयपत्री र गुरधौ ली फूल दे खिन छो डे का छन् । अकोर् तर्फ प्राकृतिक फूलको महत्वलाई बिर्सदै गएकाले गाउ“घरमा ढकमक्क फूल फुले पनि दे खाउनकै लागि प्लाष्टिकको माला प्रयो ग गनेर् संस् कार बस् न थाले को छ ।
प्लाष्टिकको माला प्रयो ग बढे पछि सयपत्री र मखमली फूल लो पो न्मुख अवस् थामा पुग्न थाले को छ । जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय र कृषिसम्बन्धी काम गनेर् संस् थाहरुले यसको संरक्षण नगर्दा पनि सयपत्री र मखमली फूल लो प हुने अवस् थामा पुग्न थाले को छ । सयपत्री फूलको सट्टा बजारबाट किने र ल्याइएको प्लास् िटकको मालाले गला ढाकिए पनि सयपत्रीको माला जस् तो सौ न्दर्यता भने दे खिदै न । सयपत्री र मखमलीविना तिहारको महत्व हु“दै न भन्दा पनि हुन्छ ।
ने पालमा अहिले सम्म ४१ जिल्लामा व्यावसायिकरुपमा फूलको खे ती गर्न थालिएको छ । काठमाडौ ं, ललितपुर, भक्तपुर, पो खरा, नारायणघाट, हे टौ ंडा, काभ्रे र विराटनगरलगायत ४५ जिल्लामा लगभग आठ सय ७५ फूलको ब्यवसाय गनेर् फार्म र नर्सरी सञ्चालनमा छन् । तिहारमा व्यावसायिकरुपमा कारो वार हुने फूलको ९० प्रतिशत शहर बजार नजिक भएका आठ जिल्लामा उत्पादन हुदै आएको छ । तिहारमा प्रयो ग हुने ८० प्रतिशत सयपत्रीको माला स् वदे शी उत्पादनले धान्छ भने बा“की २० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरे को छ । सयपत्री पूmल फुल्ने समय पहिलाको भन्दा छिटो भएका कारण के ही वर्ष अघिसम्म ढकमक्क फुल्ने सयपत्री र मखमली पूmल हिजो आज लो पो न्मुख बन्दै गएको छ ।
हाम्रो दे श भौ गो लिक विविधता र जलवायु समे त उपयुक्त भएको ले फूल व्यवसायका लागि अत्यन्त उपयो गी छ । वै ज्ञानिकढंगले प्रमुख उद्यो गका रुपमा फूल व्यवसाय स् थापित हुनसक्छ । हाम्रो दे शमा पा“च हजार आठ सय ३३ प्रजातिका फूल फुल्ने बिरुवा छन् । तीमध्ये दुई सय ४६ प्रजाति फूल अन्य मुलुकमा पाइ“दै नन् । कृषिप्रधान दे श भएर पनि अर्थतन्त्रमा मुख्य भूमिका खे ल्न सक्ने फूलजन्य पे शा उपे क्षामा परे को छ । अझै पनि फूलको व्यवसाय शहरमा मात्रै हुन्छ भन्ने हामीमा भ्रम छ । युवाहरु रो जगारीको लागि खाडी मुलुक पुगे का छन् । गाउ“का खे तबारी बा“झो मा परिणत हुन थाले का छन् । गाउ“घरमा बसे र कृषिजन्य व्यवसाय गनेर् बानीको विकास भएको छै न ।
तिहारको समयमा प्रयो गमा आउने पूmलहरु पनि अब हामीले प्लाष्टिकको किन्न थाल्यौ ं भने हाम्रो अवस्था के हो ला ? यो सबै ले सो च्नुपनेर् भएको छ । पूmल बजारमा बिक्री भए पनि त्यसको उत्पादन गाउ“मै हुन्छ भने र हामी सबै ले कहिले बुझ्ने ? पूmलको खे ती कम भए पनि माग भने क्रमशः बढ्न थाले को छ । शहर बजारमा आजभो लि फूलका बिरुवा घरआ“गन, बगै ंचा, पार्क, स् कूल, निजी कार्यालयमा सजाउने क्रम बढ्दो छ, यो राम्रो पक्ष हो  । मौ समी फूल र घरभित्र सजावटका बिरुवाको माग पनि बढ्दो छ । हरे क गो ष्ठी, से मिनार, उत्सव, महो त्सव, विवाह, ब्रतबन्ध तथा अन्य शुभकार्य हुन् वा शो क तथा श्रद्धाञ्जली जस् ता दुःखका क्षणमा पनि पूmलको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । तर उत्पादन भने मागअनुसार नभएर हामी प्लाष्टिकको पूmल किन्न थाले का छौ ं ।
सबै खाले सयपत्रीको उद्गम थलो संयुक्त राज्य अमे रिकाको दक्षिणी भूभाग, मे क्सिको तथा दक्षिण अमे रिकी महादे श हो  । त्यतै बाट सयपत्री पूmलले विश्वका विभिन्न दे शमा प्रवे श पायो  । ने पालमा कसरी र कहिले यी सयपत्री फूल आए भन्ने भरपदोर् आधार भे टिएको छै न । अहिले अने कौ ं थरीका सयपत्री पूmल पाइने गरे को छ । हाम्रो संस् कार र संस् कृतिभित्र परापूर्वकालदे खि सयपत्री फूल सांस् कृतिक फूल भएको छ । तिहारलाई सिंगानेर् सयपत्रीका फूलहरु दुई समूहमा छुट्याउन सकिन्छ । सानो कदको , सानै फूल फुल्ने र सजिलै माला उन्न मिल्ने तथा फूल पनि नझनेर् नओ इलाउने र रङ पनि नखुइलिने सयपत्रीहरु फ्रे न्च मे रिगो ल्ड समूहमा पर्छन् । यस समूहका सयपत्री फूलका बाहिरी पुष्पिका फै लिएर फक्रन्छन् । तसर्थ यिनको वै ज्ञानिक नाम पनि टागे टिस पाटुला रहे को छ । पाटुलसको ल्याटिन अर्थ फै लनु हुन्छ । सयपत्री फूलहरु गाढा चम्किलो रंगमा विशे ष गरे र सुन्तला पहें लो मा गाढा कले जी वा रातो रङमा सजिएका हुन्छन् । ठूलो खाले सयपत्री फूललाई सामान्यतः अफ्रिकन मे रिगो ल्ड भनिन्छ । यस किसिमका सयपत्री फूलहरु डल्लो आकारमा फक्रन्छन् । सुन्तला वा फिका पहे ंलो रङमा यी सयपत्री फुल्छन् ।
गो दावरी फूलको सौ न्दर्य विश्वमा सम्मानित छ । जुन फूललाई हामी गो दावरी भन्छौ ं, त्यसलाई इस् लामिक संसारमा गुलदाउदी भनिन्छ । धर्मगुरु दाउदको नाममा यो समर्पित छ । युरो प, अमे रिका, अष्ट्रे लिया, क्यानडालगायत अन्यत्र यसको प्रचलित नाम हो क्रिसान्थे मम । ग्रीक भाषामा क्रायो स भने को सुन वा सुनौ लो र एन्थे मो नको अर्थ फूल हो  । त्यस अर्थमा सुवर्ण फूल हो गो दावरी । तर गो दावरी अने कौ ं रंग र आकारमा फक्रिन्छ । इसापूर्व १५ औ ं शताब्दीमा गो दावरीलाई बगै ंचामा फुलाएर यसको इतिहास रच्ने श्रे य चीनलाई जान्छ । त्यसपछि आठौ ं शताब्दीमा यसले जापानलाई दिवाना बनायो र राजकीय सम्मान प्राप्त ग¥यो , राष्ट्रिय फूल बन्यो  । जापानी सम्राटको राजगद्दीलाई ’क्रिसान्थे मम थ्रो न’ भन्ने चलन छ । यता चीनमा गो दावरी फूलकै नाममा शहरहरु नामकरण भएका छन जस्तो – जु–जियाङ । अमे रिकाको शिकागो शहरको आधिकारिक पूmल पनि गो दावरी हो  । गो दावरी सुन्दर एवं आकर्षक फूल हो  । विशे ष गरी असो ज तथा कार्तिक महिनामा यो फूल पूर्णरुपमा फुल्छ । गो दावरी जापानको राष्ट्रिय फूल हो  ।
गो दावरी सबै को घरमा फुलाउन सकिन्छ । गो दावरी फूल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो फूलको सजावट करिब एक हप्तासम्म ताजा रहन्छ । यसका भिन्न–भिन्न पातलाई सुन्दर फूलदानीमा सजाउदा घरको शो भा बढ्छ । गो दावरीलाई चाइनिजहरुले औ षधिका रुपमा प्रयो ग गर्न खे ती नै गरे को पाइन्छ । जापान पढ्न गएका विद्यार्थीले यो फूललाई उपत्यकाको गो दावरी गाउमा रो पे पछि यो पूmलको ने पाली नाम गो दावरी रहन गयो  । गो दावरी पूmल चीनमा छ हजार पाच सय, जापानमा १९ हजार तथा ने पालमा दुई सय प्रजातिमा पाइन्छन् । ने पालका ठूला चाड–पर्व दशंै तथा तिहारको हाराहारीमा फुल्ने यो फूलको महत्व बढ्दै गएको छ ।
मखमली फूल ने पालीहरुको लागि सांस् कृतिक महत्व बो के को प्रसिद्ध फूल हो  । मखमली फूल कहिले नओ इलिने भएको ले यसलाई दीर्घायु र स् वस् थ जीवनको प्रतीकको रुपमा लिइन्छ्र । दक्षिण अमे रिकी महादे शको ब्राजिल, पानामा र ग्वाटे माला क्षे त्रबाट भित्रिएको फूल मखमली हो  । दिदीबहिनी र दाजुभाइको प्रे मलाई पवित्र गा“ठो मा बा“ध्न सफल मखमलीको माला ने पाली तिहारको अभिन्न अंग बनिसके को छ । सुपारी जस् तो गो लाकार मखमली फूल पनि सयपत्री झै ं सयौ ं फूलको पुष्पपुञ्ज हो  । नामले मखमली भनिए पनि यो फूल नरम, को मल र कलिलो नभई खस्रो हुन्छ । वै जनी र प्याजी रंगमा मखमली विशे ष लो कप्रिय छ । नझनेर् , नओ इलाउने र वषौर् ं पनि टिक्ने हुनाले यसको अजम्बरी प्रकृतिलाई आत्मसात गरे र दिदीबहिनीहरुले आफ्ना दाजुभाइलाई मखमली फूलको माला लगाइदिएर दीर्घायुको कामना गर्छन् । संस् कृतमा रक्त मल्लिका भनिने यो फूल दे ख्नमा पनि सुन्दर मानिन्छ ।
हाम्रो दे शको भौ गो लिक अवस् थाको कुरा गर्दा यहाका हिमाल पहाड तराई जुनसुकै क्षे त्र पनि प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिपूर्ण रहे का छन् । विकट हिमाली तथा पहाडी इलाकामा प्राकृतिकरुपले फुल्ने सुनाखरी लालीगुरा“स वा उपत्यका र तराईका फा“टमा फुल्ने मखमली सयपत्री हुन् सबै को आ–आफ्नै विशिष्ट महत्व रहिआएको छ । प्राकृतिक रुपले सम्पन्न हावापानीको कारणले नै यहा“को जै विक विविधताको संरक्षण हुन पुगे को छ ।
पूmलको व्यवसाय शुरु गरिसके का तथा शुरु गर्न चाहने कृषक तथा व्यवसायीहरुलाई नर्सरी व्यवस् थापन मौ समी तथा बे मौ समी फूल उत्पादन तालिमलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसके को छ । त्यसै गरी फूल व्यवसाय गर्न चाहने हरुका लागि बजार माग तथा मौ समी मागलाई दृष्टिगत गरी पूmल सजावटका तालिम सञ्चालन गर्नुपनेर् दे खिन्छ भने अकोर्तिर विदे शबाट आयात भइरहे का फूलका विरुवाहरुलाई स् वदे शमै उत्पादन गर्नका लागि विदे शी प्रविधि ज्ञान र सीपलाई बे राजगार युवायुतीहरुले व्यवहारमा उतार्न पर्दछ । पूmल आवश्यक पर्दा खो ज्ने मात्र हो इन, फुर्सदको समयमा सबै ले आफ्नो घर, आगन र करे साबारीमा लगाउने बानीको विकास गदैर् जाने हो भने प्लाष्टिकको पूmल तिहारको समयमा किन्नु पदैर् न । यो कुरा सबै ले बुझ्न जरुरी छ ।
Previous: देउखुरीको संरचनाबारे केही कुरा
Next: सबै तहमा पर्यटन विकासको योजना आवश्यक